Lithium Polymer batrị Factory, Suppliers - China Lithium Polymer batrị Manufacturers
335074 3.7v 1550mah batrị Li-po na-akwụ ụgwọ maka temometa
Igwe batrị PLM-335074 3.7V 1550mah na-eji ihe kachasị mma na ike kachasị elu enwere ike maka ndị na-azụ ahịa. Omenala OEM / ODM iwu na-anabata maka dị iche iche ngwa, anyị azụmahịa ekpuchi ọtụtụ nke Europe, Asia na America ahịa. Anyị na-atụ anya ịbụ onye gị na ya ga-ebi na China.
Volta 6.4V 1800mAh LP-E6 batrị ọkụ nwere ike ịnwe mgbapụta maka ndị na - edebanye aha ndị uwe ojii
Batrị PLM-LP-E6 7.4V 1800mAh na-agbanye ọkụ na-eji ihe kachasị mma nwere ikike kachasị elu maka ndị ahịa ọkọlọtọ. Omenala OEM / ODM iwu na-anabata maka dị iche iche ngwa, anyị azụmahịa ekpuchi ọtụtụ nke Europe, Asia na America ahịa. Anyị na-atụ anya ịbụ onye gị na ya ga-ebi na China.
Uzo abuo SC2F 7.4v 2000mAh Polymer Lithium Batri Recharge batrị maka Micro Talk Radio Pack, Ihe egwuregwu ụmụaka, Igwe elektrọn, Iwu Mmeju Iwu.
Batrị PLM-SC2F 7.4V 2000mAh na-agbanye ọkụ na-eji ihe kachasị mma nwere ikike kachasị elu maka ndị ahịa ọkọlọtọ. Omenala OEM / ODM iwu na-anabata maka dị iche iche ngwa, anyị azụmahịa ekpuchi ọtụtụ nke Europe, Asia na America ahịa. Anyị na-atụ anya ịbụ onye gị na ya ga-ebi na China.
Akwa ọkụ ọkụ 3.8V 1700mAh 803048-2P batrị li-po na-akwụ ụgwọ maka ndị na-edekọ ihe ndị uwe ojii.
Batrị PLM-803048-2P 3.8V 1700mah batrị na-eji ihe kachasị mma na ikike kachasị elu enwere ike maka ndị na-azụ ahịa. Omenala OEM / ODM iwu na-anabata maka dị iche iche ngwa, anyị azụmahịa ekpuchi ọtụtụ nke Europe, Asia na America ahịa. Anyị na-atụ anya ịbụ onye gị na ya ga-ebi na China.
NP-BX1 Li-po Battery 3.7V 1400mAh Cell Batrị maka POS, Igwefoto
Batrị PLM-NP-BX1 3.7V 1400mAh nke enwere ike ịgbagha ike na-eji ihe kachasị mma na ikike kachasị elu enwere ike maka ndị na-azụ ahịa. Omenala OEM / ODM iwu na-anabata maka dị iche iche ngwa, anyị azụmahịa ekpuchi ọtụtụ nke Europe, Asia na America ahịa. Anyị na-atụ anya ịbụ onye gị na ya ga-ebi na China.
Li-ion Batrị na-ewepu 1600mAh na-ebugharị aka NFC mbadamba PDA 2D nyocha ihu igwe na tiketi ụgbọ ala POS
Ihe batrị PLM-T8601 3.7V 1600mAh batrị na-eji ihe kachasị mma na ikike kachasị elu enwere ike maka ndị na-azụ ahịa. Omenala OEM / ODM iwu na-anabata maka dị iche iche ngwa, anyị azụmahịa ekpuchi ọtụtụ nke Europe, Asia na America ahịa. Anyị na-atụ anya ịbụ onye gị na ya ga-ebi na China.
Batrị Li-po V9 1800mAh 3.7V Igwe batrị maka Bluetooth Ọkwa, Ihe egwuregwu, Igwe eletriki, Ihe Ntinye Iwu
Batrị PLM-V9 3.7V 1800mAh nke enwere ike ịgbagha ike na-eji ihe kachasị mma na ikike kachasị elu enwere ike maka ndị na-azụ ahịa. Omenala OEM / ODM iwu na-anabata maka dị iche iche ngwa, anyị azụmahịa ekpuchi ọtụtụ nke Europe, Asia na America ahịa. Anyị na-atụ anya ịbụ onye gị na ya ga-ebi na China.